Akhriso:-Dhacdooyinkii Soomaaliya Ka Dhacay Sanadkii Tagay ee 2017-kii - HayeNews.com | Latest Somali & English news | warar xaqiiqa | HayeNews.com | Latest Somali & English news | warar xaqiiqa
(HayeNews.com)-Akhristayaasheena qiimaha badan waxaan idiin soo gudbindoona dhacdooyinki ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadkii tagay ee 2017-kii.
Waxaan bil bil u tilmaami doonaa dhacdooyinka xasuusaha mudnaa ee Soomaaliya soo maray.
Axad,01, Janaayo, 2017ki waxaa xildhibaanada Baarlamaanka soomaaliya ay magacaabeen Guddi ka shaqeeya Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka.
janaayo, 01, 2017 Madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa heshiis ku kala saxiixday,magaalada Muqdisho heshiis ku saabsan joojinta xiisada colaadeed ee magaalada Gaalkacyo.
Waxaana si rasmi ah hishiiskaasi u saxiixay C/wali Max’ed Cali Gaas iyo C/kariin Xusseen Guulleed. Waxaa goob joog ka ahaa Xassan Sheekh Max’uud oo xiligaa ahaa Madaxweynaha Soomaaliya.
02, Janaayo 2017ki. shan qof ayaa ku geeriyootay labo qarax oo ismiidaamin ahaa kuwaasi oo ka dhacay Agagaarka Garoonka Muqdisho.
Jan 3, 2017 – Al-Shabaab ayaa meel fagaaro ah midkiiba gacanta midig uga jaray laba dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyay inay xatooyo ku kaceen.
5, January 2017. Xasan Sheekh Maxamuud oo xiligaa Madaxweyne Dalka ka ahaa ayaa xarigga ka jaray dhismaha baarlamaanka Aqalka Sare ee magaalada Muqdisho
10,January , 2017ki- 54 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala laabteen C/kariin Xuseen Guuleed oo xiligaa ahaa Madaxweynaha Galmudug.
11 ,Jan , 2017ki – Doorashadi Gudoomiyaha Baarlamaanka soomaaliya Waxaa ku guulaystay Xildhibaan Maxamed Shiikh Cismaan (Jawaari) oo helay codadka ugu badan ee Xildhibaanada cusub Aqalka hoose ee Gollaha shacabka Soomaaliya.
Axad, 24, Jan , 2017ki- Guddoonka Golaha Shacabka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay Guddiga Doorashada Madaxweynaha oo ka koobnaa 16 xubnood.
25,Jan 2017ki – Waxaa Laba Qarax oo lagu weeraray Hotel Dayax. ku geeriyooday 28 qof iyadoona ay ku dhaawacmeen 51 qof.
22,Jan 2017ki – waxaa magaalada muqdisho lagu doortay Guddoonka Aqalka Sare waxaana gudoomiye loo doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
30, January, 2017ki- 31 Qof ayaa ku geeriyootay gobolka Bay kadib marki ay cabeen biyo sumeysan.
24, Jan , 2017ki- Guddoonka Golaha Shacabka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay Guddiga Doorashada Madaxweynaha oo ka kooban 16 xubnood.
8,Feb 2017 ki- Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, kadib markii uu ka adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed.
February 22, 2017ki– Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu caleemo saaray magaalada muqdisho waxaana munaasabada caleemasaarka ka qeybgalay Madax ka socotay wadamada Afrika.
February 16, 2017ki: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah xafiiska madaxtooyada ugala wareegay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
23 Feb 2017 ki Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maalin khamiis ah waxa uu ra’isul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre.
February 27, 2017ki waxaa dab qasaare hantiyadeed dhaliyay uu ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha,waxaana dabkaasi uu qaatay demintiisa saacado badan.
February 15, 2017ki- waxaa xili habeen ah Magaalada Muqdishe ee caasimadda Soomaaliya, lagu dilay Allahunaxariistee nabadoon caan ah oo lagu magacaabijiray Muuse Maxamuud Rooble
Marso, 01, 2017ki– Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cod akhlabiyad leh ku ogolaaday ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, hortagay fadhigii baarlamaanka.
Maalin axad ah 12,Mar 2017 – Ciidamo ka militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay qeybo badan oo ka mid ah magaalada caasimada ah Muqdisho, iyaga ka cabanaya mushaar la’aan.
23,Mar 2017- waxaa Magaalada Nairobi heshiis kuwada gaaray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya.
25, Maarso, 2017- Maalin sabti Koox burcad badeed Soomaali ah, ayaa afduubtay doon la yiraahdo Caseer Two oo mareysay meel u dhow degmadda Ayl.
7, Mar2017ki- Waxaa magaalada muqdisho soogaaray Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres waxana muqdisho uu kulakulmay madaxweyne farmaajo.
28, Marso 2017ki Kooxda Daacish ayaa markii ugu horeysay sheegatay in ay sarkaal ka tirsan nabad-sugida Soomaaliya ku dishay magaalada Muqdisho
29, Marso 2017ki Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa Ansixiyay Wasiirada uu soo magacaabay Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
06, April 2017Ki- Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sirasmi ah loogu qaaday xilka Gudomiyaha Gobolka Banaadir iyadoona loo magacaabay Taabit Cabdi Maxamed.
08, April 2017KI- Maxkamada Ciidamada Puntland ayaa xakun dil ah ku fuliysay shan nin oo lagu soo eedeeyey in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
10, Apr 2017ki – Maalin isniin ah Ugu yaraan 10 askari oo u badan saraakiil ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xero ciidan oo ku taalla Warshadii hore ee Nacnaca ee degmadda wadajir ee magaalladda Muqdisho.
09, Apr 2017ki – Maalin Axad Ugu yaraan 15 ruux ayaa ku geeryootay halka 20 kalana ay ku dhaawacmeen, kadib markii qarax gaari loo adeegsaday uu ka dhacay meel u dhow wasaaradda Gaashaandhigga ee ku taalla magaalladda Muqdisho.
24, April 2017-ki Gadiid galbinayay Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa afafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ku jiiray Alllahu naxariistee Tahliil Jimcaale Hubbane oo katirsanaa shaqalaha wasaarada warfaafinta Soomaaliya.
03, May 2017ki- Waxaa meel aan ka fogeyn Madaxtooyada soomaaliya lagu dilay wasiirkii hawlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabbaas Siraaj.
05, May 2017ki- waxaa Golaha wasiirada soomaaliya xilka qaadis ku sameyeen Hanti dhowrki Guud ee Qaranka Dr Nuur Faarax Jimcaale oo lagu eedeeyay in askari ilaalo u ahaa uu dilay Wasiir Siraaji.
20, may 2017ki—Maalin Sabti 23-kun oo arday ah ayaa u fariisatay Imtixaanaadka mideysan ee shahaadiga ee ay soo diyaarisay Wasaaradda Waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
7 June,2017ki- dowlada soomaaliya ayaa Go’aan dhex dhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafka soo kala dhexgalay wadada khaliijka
8, June 2017- Al-shabaab ayaa Weerar ay ku qaadeen deegaanka Af-urur ku dilay 40 qof oo saraakiil iyo ciidamo puntland katirsanaa isugu jiray.
14 June,2017ki Waxaa Xili habeen ah weerar lagu qaaday Pizza House ee magaalada muqdisho ku dhintay 18 qof waxaana dhaawacyo weerarkaasi ay ka soogaareen dad ka badan 26 qof.
20-kii June 2017ki –10 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir.
22, june 2017ki waxaa qarax Baabuur loo adeegsaday uu ka dhacay Saldhiga Degmada Waaberi, waxana qaraxaasi ku nafwaayay 7 qof waxana qaraxaasi dadki ku dhintay kamid ahaa Maxamed Yuusuf Aw Libaax oo ahaa Wasiirkii Dhalinyarada iyo Isboortiga Maamulka Jubbaland
18, July 2017-ki. Golaha Wasiirada Maamulka Puntland, ayaa la riday, kadib markii codka kalsoonida ay u qaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland oo kulan ku yeeshay xaruntooda Golaha Shacabka.
19, July 2017-ki. Waxaa Magaalada Muqdisho la keenay seddax nin oo Soomaali ah kuwaasoo la sheegay in ay la shaqeeyaan maggafayaasha ku sugan waddanka Libya.
30, July 2017-ki Waxaa Maalin Axad ah Qarax Gaari lagu soo xiray uu ka dhacay Meel aan ka fogeyn Hotelka Maka Al-mukarama, waxaana qaraxaasi ku dhintay 5 qof oo shacab ahaa.
6, Aug 2017 ki- Waxaa doorasho ka dhacay Magaalada Hargeysa lagu doortay Gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliland waxaana doorashadi dhacday ku soobaxay Baashe Maxamed Faarax.
14, August 2017ki Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay kalsoonida kala noqdeen madaxweynihii maamulkaas Cali Cabdullaahi Cosoble.
15, August 2017 Hoggaamiye ku xigeenkii hore ee Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayaa si rasmi ah magaalada muqdisho kaga dhawaaqay in uu si rasmi ah uga baxay Al-Shabaab.
25, August 201ki- 10 Qof ayaa lagu dilay deegaanka Bariire ee gobolka shabeelaha hoose kadib howlgal militeri oo ka dhacay beer ku dhow deegaanka Bariire.
31, August 2017 Dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay u soo gacan galisay C/kariin qalbi dhagax oo tirsanaa ururka ONLF.
24, September, 2017-ki Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in shan saacadood ku xayirtay magaalada Hargeysa.
28, September 2017-ki Todoba qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena wey ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan meel ku dhow Bacadlaha Xamar Weyne.
01, October 2017- Waxa dowladda soomaaliya ay xilka qaadis ku sameysay Taliyayaashii Booliiska iyo Nabadsugidda ee degmada Xamarweyne kadib dil d degmadaasi loo gaystay xubin ka tirsan mas’uuliyiinta ururuka Haweenka qarana Canab Cabdullaahi Xaashi iyo wiil ay dhashay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Soomaalida Batuulo Axmed Gaballe.
02, October 2017 Taliyihii ciidamada garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalakacayo iyo qof kale oo rayid ahaa ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday garoonka.
12 Oktoobar 2017ki– Waxaa xilalki ay hayeen iska casilay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ku magacownaa wasiirka gaashaandhiga soomaaliya iyo Taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Axmed Jimcaale Geedi (Cirfiid).
14, Oct 2017ki Qarax Gaari Xamuul ah lagu fuliyay uu ka dhacay isgoyska Soobe ee Magaalada Muqdisho waxaana Qaraxaasi ku dhintay dad ka badan 400 oo qof iyadoona ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 700 oo qof.
28, Oct 2017ki -28 qof ayaa ku geeriyootay weerar lagu qaaday Hoteelka Naasa-Hablood 2 waxaana dadka dhintay ku jiray wasiirki arimaha gudaha Maamulka Koonfur galbeed, iyo Ex Xildhibaan hore C/naasir gaarane, waxaa dadka dhintay ku jiray Taliyihii Booliska deyniile.
29, Oct 2017 Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu qabtay shir u dhaxeeyay Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ka jira kaas oo lagu soo afjaray khilaafka u dhaxeeya Dowladda Soomaaliya iyo Madaxda dowlad Goboleedyada.
13, Jul 2017ki Magaalada Kismaayo waxaa markii ugu horaysay lagu qabtay shirka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya
15,November 2017 Maryan Qaasim wasiirkii gar-gaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iska casishay xilka wasiirnimo.
15, November 2017ki- Ra’isul wasaaraha soomaaliya ayaa tagey degmada Baraawe ee Gobolka shabeelaha hoose waxana uu dhagax dhigay Garoonka degmadaasi.
19 November 2017ki– Maalin axad ah Golaha Shacabka ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa sharcidarro ku tilmaamay in Somalia ay Ethiopia u dhiibto Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF.
26, November 2017 Ra’isul wasaare xasan cali kheyre ayaa Maxamed Mursal Sheekh waxa uu u magacaabay wasiirka difaaca soomaaliya.
06,DECEMBER 2017- Maamulada Ahlusuna iyo Galmudug ayaa heshiis rasmi ah waxa ay ku kala saxiixdeen xarunta madaxtooyada soomaaliya.
08,December 2017ki- Waxaa muqdisho si rasmi aha kaga bilowday ciyaaraha Tartanka Maamul Gobolleedyada Soomaaliya iyo Gobolka Banaadir.
11,December 2017ki –Allahunaxariistee waxaa magaalada muqidsho lagu dilay Maxamed Ibrahim Gaaboow oo ahaa wariye ka tirsanaa telefishinka Kalsan
13, December 2017- Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey miisaaniyadda dawladda ee sannadkan soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan 274 milyan oo dollar.
14, December 2017- Waxaa qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay Dugsiga Tababarada ciidanka Booliska soomaaliyeed ee jeneral kaahiye waxaana qaraxaasi ku dhintay 16 askari oo tirsana Booliska soomaaliya.
27, December 2017- Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ansixiyay Golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle.
28–December 2017- Dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in si rasmi ah ay ula soo wareegtay Maamulka Hawada soomaaliya.
30, December 2017-Ciidamo katirsan dowlada soomaaliya ayaa weerar ku qaaday Hoyga uu Magaalada muqdisho ka degen yahay Sanater Cabdi xasan cawaale qeybdiid.
Waxaa Diyaariyay Warbixintaan Sharmarke Maxamuud Xuseen(Sharmaan)